Cuntada: Maxay yihiin Wareegyada-Website-ka iyo Daroorka Bots iyo Sidee loo Iska Jaraa?
Marka la marayo warbixinta taraafikada Google Analytics, mid ka mid ah waxyaabihii la qori lahaa ayaa ah isha gaadiidka muuqda. Mararka qaar, qaar ka mid ah ilaha ayaa laga yaabaa inay keenaan xaddi badan oo gaadiidka ah marka loo eego kuwa kale. Marka la eego aragti dhaw, mid ayaa laga yaabaa in uu ogaado in farriinta laga soo xigtay labadan: darodar - 1st endurance efs.com, iyo buttons-for-website.com. Marka laga reebo iyaga oo ka muuqda wargeysyada GA, waxaa jira fursad aanad waligeed maqlin goobahaas ka hor, waxayna aad u jecel yihiin inay ogaadaan sababta ay u keenayaan gaadiidka intaa ka badan
Si loo soo koobo tan, labada domain waxay isticmaalaan xeelad loo yaqaanno spam referrer. Max Bell, oo ah khabiirka ugu sareeya ee ka socda Semt , wuxuu sharxayaa in fikradda ka dambaysa spam gudbinta ay tahay in goobaha ay isku keenaan xiriiro badan oo ku saabsan hal domain ka gaar ah oo ay doonayaan inay kor u qaadaan. Marka mashiinnada raadiyaha ay gurguuraan diiwaanada, waxay u arkaan tilmaamahan oo ay ku jiraan warbixinnada kama dambaysta ah. Waxyaabaha hoos u dhacani waa in aysan jirin wax gaadiid ah oo sax ah oo laga yaabo inay bedelaan habka uu go'aan ka gaadho bogga internetka.
Maadaama mareegta oo dhan ay dib ugu noqdaan meel gaar ah, mulkiiluhu wuxuu noqon karaa mid xiiso leh sida sababta boggu u tirinayo gaadiidka badan. Marka ay gujiyaan URL-ka warbixinnada GA, waxay u direysaa bogga taleefoonka, ka dibna u turjumaya booqasho cusub. Goobta spamming, hits waxa ay ka timaadaa milkiilayaasha aan waxba galabsanin waa organic
Nasiib wanaag, ma jirto khatar dhab ah oo ku timid website-ka. Sidii hore loo sheegay, waxay ka dhigeysaa dhammaan xogta la soo ururiyey gaadiidka ilaa goobta ay ka dhigan tahay lambarka. Natiijadu waa warbxin rikoodh ah oo aan rinjiyeynin sawirka dhabta ah ee la socda goobta. Caadi ahaan, heerarka xamaasadku waa 100% oo leh waqti go'an oo eber ah.
Waa lagama maarmaan in la xakameeyo badhanka internetka iyo darrada si aad u hesho muuqaal dhab ah oo ku saabsan waxqabadka goobta. Inta badan qoraalada la xidhiidha tirtiridda dhibaatada waxay sharraxayaan isticmaalka muuqaalka "filimka" Bottring "cusub ee Google Analytics. Marka la eego goobaha View, Google wuxuu ku darey sanduuqa kumbuyuutarrada oo uu isticmaali karo inuu hubiyo ama ka tago aan la ogaan. Laga soo bilaabo waayo-aragnimo leh ikhtiyaarkan, gabagabada qodobkan waxay ku xiran tahay in xulashada baayacmushtarka badeecaddu aanay ka saari karin labada sirood ee gudbinta: darodar..com, iyo buttons-for-website.com
Habka ugu fiican ee lagu xakameyn karo badhanka-shabakadda internetka iyo darrada in la keeno gaadiidka gawaarida waa in la isticmaalo filter-ka. Isticmaal hababka soo socda:
1. Fur Google Analytics kadibna riix 'Admin tab'
2. Muuqaalka muuqaalka ee ku yaala midig saxan waa inuu soo bandhigaa submenu halkaas oo ay ku socoto in la sameeyo "Abuur Cusub." Khabiiradu waxay kugula talinayaan abuurista sifeeyaal khaas ah oo hoosta ku haysa si markaa dhammaadka geedi socodka, waxaa weli jira aragti aan sifudud lahayn oo leh dhammaan xogta qashinka ee isbarbardhigga
3. Soodhee magacaaga
4. Fiilooyinka Filters, dooro + Fursadda Cusub ee cusub
5. Isticmaal magac magac u leh filinka cusub
6. Nooc filter ahi waa inuu ahaadaa Custom
7. Isticmaal Tixraac Faahfaahin ka dibna ka gaabi Magaca tifaftiraha kowaad (badhanka bogga internetka).
9. Ku soo celi tallaabada 5 ee darodar.com